သူမရဲ့ချစ်ရတဲ့ မိခင်ကြီးကွယ်လွန်သွားပြီးမှ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြလာတဲ့မေပန်းချီ – Nyi Ma Lay
သူမရဲ့ချစ်ရတဲ့ မိခင်ကြီးကွယ်လွန်သွားပြီးမှ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြလာတဲ့မေပန်းချီ
ခန္ဓာကိုယ် တောင့်တင်း လှပပြီး ဆက်ဆီကျကျ ဓာတ်ပုံလေး တွေကို အမြဲတမ်း တင်ပေးလေ့ ရှိပြီး တစ်တုတ်လို့ ချစ်စနိုး ခေါ်ကြတဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ်မင်းသမီးချောလေး မေပန်းချီ ကိုတော့ လူတိုင်း သိကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေ ထဲမှာ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် အဖြစ် အကောင်းမွန်ဆုံး သရုပ်ဆောင် နိုင်ပြီး အပြုံးချိုချိုလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မွန်မလေးဖြစ်တဲ့ သူမကို ပရိသတ်တိုင်းက ချစ်ခင် ကြပါတယ်နော်။ လက်ရှိ မှာတော့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေမရှိပဲ Online Live Sale တွေ ရောင်းချပေး နေပြီး အရမ်းကို အောင်မြင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်‌ မေပန်းချီ ဟာ ကွယ်လွန်သူ သူမ မိခင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးဆန်းတာ လေးတွေကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ ” ဘယ်ဆရာတော်ဘုရားကပဲ ကိုယ့်ကို တွေ့တွေ့ ဘယ်ဆရာမက ပဲ ကိုယ့်ကို တွေ့တွေ့ သမီး သမီးအမေက သမီးကို စောင့်ရှောက် နေတာ သိလား? ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းအမြဲ ကြားရတယ် အမေဟာ ကိုယ်ငယ်ငယ်လေး ကထဲက အရမ်းထူးဆန်းတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဆိုတာ ကိုယ်လက်ခံခဲ့တယ် သူမထွက်သွားခင် သူထွက်သွားမဲ့ အသက်အပိုင်း အခြားကို ရေးပေးခဲ့ သလို တကယ် အဲ့အသက်မှာပဲ ထွက်သွားခဲ့ တယ် တရားထဲ ပျော်မွေ့နေတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်မို့ တချို့အရာတွေဟာ အခုထိ ထူးဆန်း နေခဲ့တုန်း” လို့ မေပန်းချီ ဟာ သူ့ရဲ့ လူမူ့ကွန်ယက် ပေါ်မှာ ရေးသား ထားတာကို တွေ့ရ ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီ ဟာ မိခင်ကို အရမ်းသိတတ်သူ ဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်သွားသည့် တိုင် ယနေ့ အချိန်ထိ မိခင်အတွက် ကောင်းမှု ကုသိုလ်လေးတွေ ပြုလုပ် ပေးနေတာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးထိ ဖတ်ရှု့ ပေးတဲ့ စာဖတ် ပရိသတ်ကြီး ကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်။
ခႏၶာကိုယ္ ေတာင့္တင္း လွပၿပီး ဆက္ဆီက်က် ဓာတ္ပုံေလး ေတြကို အျမဲတမ္း တင္ေပးေလ့ ရွိၿပီး တစ္တုတ္လို႔ ခ်စ္စနိုး ေခၚၾကတဲ့ ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမာ္ဒယ္မင္းသမီးေခ်ာေလး ေမပန္းခ်ီ ကိုေတာ့ လူတိုင္း သိၾကလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားေတြ ထဲမွာ ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ အျဖစ္ အေကာင္းမြန္ဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ နိုင္ၿပီး အျပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေလးကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ မြန္မေလးျဖစ္တဲ့ သူမကို ပရိသတ္တိုင္းက ခ်စ္ခင္ ၾကပါတယ္ေနာ္။ လက္ရွိ မွာေတာ့ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ေတြမရွိပဲ Online Live Sale ေတြ ေရာင္းခ်ေပး ေနၿပီး အရမ္းကို ေအာင္ျမင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သ႐ုပ္ေဆာင္‌ ေမပန္းခ်ီ ဟာ ကြယ္လြန္သူ သူမ မိခင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထူးဆန္းတာ ေလးေတြကို ေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္။ ” ဘယ္ဆရာေတာ္ဘုရားကပဲ ကိုယ့္ကို ေတြ႕ေတြ႕ ဘယ္ဆရာမက ပဲ ကိုယ့္ကို ေတြ႕ေတြ႕ သမီး သမီးအေမက သမီးကို ေစာင့္ေရွာက္ ေနတာ သိလား? ဆိုတဲ့စကားတစ္ခြန္းအျမဲ ၾကားရတယ္ အေမဟာ ကိုယ္ငယ္ငယ္ေလး ကထဲက အရမ္းထူးဆန္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ဆိုတာ ကိုယ္လက္ခံခဲ့တယ္ သူမထြက္သြားခင္ သူထြက္သြားမဲ့ အသက္အပိုင္း အျခားကို ေရးေပးခဲ့ သလို တကယ္ အဲ့အသက္မွာပဲ ထြက္သြားခဲ့ တယ္ တရားထဲ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္မို႔ တခ်ိဳ႕အရာေတြဟာ အခုထိ ထူးဆန္း ေနခဲ့တုန္း” လို႔ ေမပန္းခ်ီ ဟာ သူ႔ရဲ့ လူမူ႔ကြန္ယက္ ေပၚမွာ ေရးသား ထားတာကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမပန္းခ်ီ ဟာ မိခင္ကို အရမ္းသိတတ္သူ ျဖစ္ၿပီး ကြယ္လြန္သြားသည့္ တိုင္ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ မိခင္အတြက္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ေလးေတြ ျပဳလုပ္ ေပးေနတာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုံးထိ ဖတ္ရႈ႔ ေပးတဲ့ စာဖတ္ ပရိသတ္ႀကီး ကို ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါတယ္။
Previous post သူမရဲ့ချစ်ရတဲ့ဘဝလက်တွဲဖော်နဲ့ ရွှေလက်တွဲပြီးမင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးအလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေချပြလိုက်တဲ့ အဆိုတော်ကြီးစိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့သမီးဆိုင်စံ
Next post သရုပ်ဆောင်ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ ခင်ပွန်းကို မနေ့ညက စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က လာရောက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသွားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်